प्रदिप पौडेललाई ऋषि धमलाको प्रश्न-प्रचण्ड तपाईँहरुलाई नभई नहुने कारण के हो ? (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
(Wednesday 22nd June 2022)
प्रदिप पौडेललाई ऋषि धमलाको प्रश्न-प्रचण्ड तपाईँहरुलाई नभई नहुने कारण के हो ? (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : 2022 June 22, 11:40 am
काठमाडौं, ८ असार । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेलले वर्तमान सरकार सफलताको बाटोमा अघि बढेको बताएका छन् । उनले सरकार अप्रत्यासित रुपमा आएकोले धेरै अपेक्षा गर्नु स्वभाविक नभएको टिप्पणी गरे । सरकारले हालै स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोले अब संघ र प्रदेशको पनि निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटेको उनको भनाई छ ।
हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको गठबन्धन गणित प्राप्त गर्नको लागि मात्रै नभएर देशलाई विकास गर्नको लागि साझा प्रयत्न गर्नको लागि भएको जिकिर गरे । देशको जटिल परिस्थितिमा समन्वय गर्ने काम पनि कांग्रेसले नै गरेको उनको दाबी छ ।
कुराकानीको क्रममा पत्रकार धमलाले तपाईँहरुलाई प्रचण्ड नभई नहुनुपर्ने कारण के हो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा पौडेलले भने–‘होईन नभई नहुने भन्ने पनि कुनै कारण छैन्, गठबन्धन भनेको गिभ एण्ड टेक हो ।’ उनले आगामी संसद्को निर्वाचनमा गठबन्धन मिल्यो भने हुने मात्रै हुने जिकिर गरे । उनले कसैलाई हराउनको लागि मात्रै गठबन्धन गर्नुको कुनै अर्थ नहुने जिकिर गरे ।
महिला मन्त्रीलाई धमलाको प्रश्नः “महँगी अचाक्ली बढ्यो, सरकारले केही गर्न सकेन मन्त्रीज्यू !”
काठमाडौं, ८ असार । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले विश्वव्यापी रुपमा बढेको
‘सिद्धान्तविहिन’ रविको यात्रा कता
काठमाडौं, ८ असार । रवि लामिछानेले पशुपतिनाथको दर्शन गरेर पार्टी घोषणा गर्दा चन्दन लगाएका थिए
माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन गर्ने हो भने प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको पुष्ट्याइँ हुन्नः देवेन्द्र पौडेल
काठमाडौं, ८ असार । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेको चाहनामा गठबन्धन नटुट्ने दाबी गरेका छन्
काठमाडौं, ८ असार । नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले तातोपानी नाका खोल्ने कुरालाई नारा बनाउन
भारतको अग्निपथ के हो र नेपालमा के असर पर्ला
काठमाडौं, ८ असार । यतिबेला भारतमा ‘अग्निपथ’ नाम दिइएको सैनिक भर्तीसम्बन्धी योजना चर्चामा छ ।
भारतमा पहिलो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन्न लागेकी द्रोपदी को हुन्
एजेन्सी, ८ असार । भारतमा पहिलो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन्ने निश्चितप्रायः भएको छ । सत्तारुढ
मन्त्री आलेको जनपक्षीय निर्णय, अब काठमाडौं बाहिरबाट पनि फस्ट फ्लाईट, हेलिकप्टरमा दुई पाईलट अनिवार्य
काठमाडौं, ७ असार । एक्शन ओरिएण्टेड मिनिस्टरको रुपमा चिनिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेमबहादुर
काठमाडौं, ७ असार । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० वर्षे सशस्त्र माओवादी युद्धको
दुधौलीका जनताको इच्छाअनुसार विकासका धेरै योजना पार्न सफल युवा नेतृ निरौला
काठमाडौं, ८ असार । नेपाली कांग्रेसकी युवा नेतृ इन्दिरा निरौलाको पहलमा सिन्धुलीको दुधौलीका विभिन्न स्थानमा
काठमाडौं, ८ असार । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेलले वर्तमान सरकार सफलताको बाटोमा अघि
एन्फाका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सपथ आज
काठमाडौं, असार ८ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीले आज सपथ